Frank Lampard oo si weyn u difaacay mid ka mid ah xiddigahiisa kooxda Chelsea – Gool FM
(London) 20 Nof 2020. Tababaraha kooxda Chelsea ee reer Engaland Frank Lampard ayaa xaqiijiyay kalsoonida uu u qabo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Mason Mount, isagoo carabka ku adkeeyay inuu rajeynayo inuu dib u soo ceshado heerarkiisa sare ee Blues.
Mason Mount wuxuu ku soo afjaray waajibaadkiisii ​​caalamiga ahaa ee xulka qaranka England si wanaagsan, wuxuuna ka soo muuqday ciyaartii Iceland, ee Saddexda Libaax ay ku badiyeen 4-0, wuxuuna dhaliyay gool.
Waxaa la filayaa in Lampard uu ku tiirsanaan doono adeega Mount inta lagu guda jiro kulanka Chelsea ay la ciyaareyso Newcastle berri oo Sabti ah, kaasoo qeyb ah kulamada Isbuuca 9-aad horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan.
Haddaba Frank Lampard oo ka hadlayay dhaleeceynta iyo cadaadiska uu Mason Mount uu ka helayo taageerayaasha ayaa wuxuu yiri:
“Waxaan u maleynayaa heerka kalsoonida ee tababaraha qaranka Gareth Southgate uu ka muujiyay Mount inay xaqiijineyso inuu u qalmo in lagu tirsanaado adeegiisa.”
“Waxaa laga yaabaa inuu yahay ciyaaryahan baasas tayo sare leh xilliyada cadaadiska lagu jiro kulamada marka loo fiiriyo inuu yahay ciyaaryahan bandhig leh, tani ma farxad galinayso taageerayaasha kubadda cagta ee casriga ah, laakiin anaga ahaan tababarayaal ahaan waxaan aragnaa sida aan ugu tiirsanaan lahayn isaga.”
“Mason Mount waxa uu leeyahay dabeecad aad u fiican, waa xiddig da’ayar ah wakhti badana u heysta in uu soo bandhigo tayadiisa.. waxa uu ka qayb galay 3 kulan waxana uu ahaa ciyaaryahanka kaliya ee aan wax ka badalin xulka England laakiin aniga ma awoodo inaan dhaleeceeyo go’aanada Gareth Southgate.. balse waxaan rajaynayaa in Mount uu ku jiro xaalad fiican.”
Si kastaba ha ahaatee, Ciyaaryahanka garabka ka ciyaara reer Mareykan ee Christian Pulisic ayaa seegi doona kulanka ay bari kooxdiisa Chelsea u safri doonto garoonka St. James’ Park, sababa la xiriira dhaawac muruqa ah uu qabo, halka daafaca reer Brazil ee Thiago Silva uu qaadan doono nasiino.